Half of U.N. Security Council ask Guterres to publicly brief on Myanmar – CRM
UNITED NATIONS (Reuters) – Seven members of the United Nations Security Council, including the United States and Britain, on Friday asked U.N. chief Antonio Guterres to publicly brief the 15-member body next week on the violence in Myanmar that he has described as ethnic cleansing.
U.S. President Donald Trump wants the United Nations Security Council to take “strong and swift action” to end the violence, Vice President Mike Pence said on Wednesday.
A U.N. Security Council resolution would need nine votes in favour and no vetoes by Russia, China, the United States, Britain and France.
Source : https://in.reuters.c
Posted on June 13, 2018 Author swelsone
ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် Christine Schraner Burgener ဟာ ဒီကနေ့ မနက်ပိုင်းမှာ နေပြည်တော်ကို ရောက်ရှိလာပြီး မနက် ၁၀နာရီမှာ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့သလို ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီး၊ လွှတ်တော်ဥက္ကဌ တို့နဲ့ တွေ့ဆုံဖို့ ရှိနေပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ခရီးစဉ်မှာတော့ မြန်မာပြည်က လက်ရှိအခြေအနေတွေကို နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀ိုင်းကို မှန်မှန်ကန်ကန်တင်ပြနိုင်မယ်လို့လည်း မြန်မာအစိုးရဘက် မျှော်လင့်ထားပါတယ်။ ဒီသတင်းကို ဗွီအိုအေမြန်မာပိုင်းရဲ့သတင်းထောက် ကိုမိုးဇော်က တင်ပြထားပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် Christine Schraner Burgener လက်ရှိတာဝန်ကို ပြီးခဲ့တဲ့ ဧပြီလမှာ စတင်လက်ခံခဲ့တာပြီး မြန်မာပြည်ကို ပထမဆုံးလာရောက်တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ဟာ ဒီကနေ့မနက်မှာ ရောက်ရှိလာကြောင်းကို နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနဲ့ စီးပွားရေးဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးကျော်မိုးထွန်းက […]
Posted on December 29, 2017 Author swelsone